Umaka: zynga | Martech Zone
Ukusebenza nezinkampani zobuchwepheshe, kuyangimangaza ukuthi bangaki abaphethe amapulatifomu abo ku-Amazon Web Services (AWS). INetflix, iReddit, i-AOL, nePinterest manje seziqala ukusebenza kumasevisi we-Amazon. Ngisho neGoDaddy ihambisa iningi lengqalasizinda yayo lapho. Ukhiye wokuthandwa yinhlanganisela yokutholakala okuphezulu nezindleko eziphansi. I-Amazon S3, ngokwesibonelo, yenzelwe ukuletha ukutholakala okungama-99.999999999%, kusetshenziswa izigidigidi zezinto emhlabeni jikelele. I-Amazon idume kakhulu ngamanani ayo anolaka
Obunye bobuchwepheshe obumangazayo, obuthuthuke kakhulu engabubona e-IRCE kwakungu-Optimove. I-Optimove yisoftware esekwe kuwebhu esetshenziswa ngabakhangisi bamakhasimende kanye nochwepheshe bokugcinwa ukuze bakhulise amabhizinisi abo aku-inthanethi ngamakhasimende abo akhona. Isoftware ihlanganisa ubuciko bokumaketha nesayensi yedatha ukusiza izinkampani ukuthi zikhulise ukubandakanyeka kwamakhasimende kanye nenani lempilo ngokuzenzekelayo ukumaketha kokugcina okwenziwe kwaba ngokwakho futhi okusebenzayo. Inhlanganisela eyingqayizivele yomkhiqizo wobuchwepheshe ifaka ukumodeliswa kwamakhasimende athuthukile, izibikezelo zamakhasimende ezibikezelayo, ukuqondiswa kwamakhasimende okuxekethile,